प्रतिगमनसम्बन्धी समझदारी र अध्यादेशको सन्दर्भ - Lekhapadhi पढ्न छुटाउनु भयाे की ! : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २४ भाद्र २०७८, बिहीबार ११:४३ मा प्रकाशित
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ पुस ५ गतेयता बारम्बार गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी हेर्ने ? यो विषय अहिले पनि तात्कालिक महत्वको छ अर्थात् त्यो (बारम्बारको असामयिक प्रतिनिधि सभा विघटन) इतिहासको विषय बनिसकेको छैन । यदि त्यो परिघटना इतिहासको विषय बन्थ्यो भने अहिलेको राजनीति परिदृष्य सोहीअनुसार फरक बन्न सक्दथ्यो । खासगरी नेकपा (एमाले) मा फुट हुँदैनथ्यो तर एमाले अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन त के, गल्तीसम्म मान्न तयार छैनन् (स्मरण गर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतद्वारा पहिलो प्रतिनिधि सभा विटघन बदर गरेपछिको उनको त्यो अभिव्यक्ति, त्यतिखेर उनले भनेका थिए– ‘मलाई सपनामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको गलत लागेको छैन’) । अहिले उनको त्यही लाइनमा नेकपा (एमाले) हिँडेको छ । ओलीद्वारा गरिएको बारम्बारको प्रतिनिधि सभा विघटनकै तत्कालिक राजनीतिक परिघटनाको सवालमा समान समझदारी नभएकै कारण माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएर २०७८ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट विधिवतः रूपमा मान्यतासमेत पाइसकेको अवस्था छ ।
केपी शर्मा ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन २०७२ सालको संविधानअनुसार गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ । उक्त फैसलाको सेरोफेरोमा वकिल र सरोकारवालाहरूले धेरै व्यापक, मौलिक र रचनात्मक तर्क राखिसकेका छन् । त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ– (क) पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन यसकारणले गलत थियो, मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान संविधानको धारा ७६ मा हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोगबिना नै ओली सरकारद्वारा उक्त कदम उठाइएको थियो (ख) दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन यसकारणले गलत थियो, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सही प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको थिएन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को संवैधानिक आलोकमा व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेकपा (एमाले) र जनता–समाजवादी पार्टीभित्रको असामान्य परिस्थिति वैधानिक प्रक्रियाबाट क्रमशः सामान्य बन्दै गएपछि अहिले देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ ।
देउवा सरकारले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा कायम भएको गठबन्धन कायम राख्नका लागि राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । त्यसअनुसार सम्बन्धित राजनीतिक दल र त्यसको संसदीय दलमा २०, २० प्रतिशत सङ्ख्या जुटाउन सकेको खण्डमा नयाँ दल दर्ता गर्न सकिन्छ । यसरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइसकेपछि प्रदेशमा रहेका सांसदहरूले २१ दिनभित्र अलग गठन भएको वा पुरानै अवस्थामा रहेको राजनीतिक दलमध्ये कुनै एउटा दल चुन्न पाउने छन् । यतिखेर नेकपा (एमाले) र जनता–समाजवादी दलका प्रदेश सांसदहरू दल चयन गर्न पाउने स्वविवेकीय अधिकार उपयोगको चरणबाट गुज्रिरहेका छन् ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा के फरक छ ? बुँदागत रूपमा यस्तो अन्तरलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
नेपाली समाज अहिले पनि निम्न पुँजीवादी बाहुल्यतायुक्त छ । त्यसकारण हामीकहाँ व्यक्तिपूजाको प्रवृत्ति वा वीरपूजक प्रवृत्ति नयाँ होइन । आफूलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र यहाँसम्म कि माक्र्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्ने एमाले पङ्क्तिभित्र पनि वीरपूजक प्रवृत्ति मौलाएको त होइन ? राजनीतिक वृत्तमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ः भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र चीनसित पारवहन सम्झौता मात्र उपलब्धिको आधारमा एमाले पङ्क्ति कसरी यति बढी ओलीपूजक हुन पुग्यो ?
अहिलेको अध्यादेशलाई एमाले फुटाउने माध्उमसम्बन्धी अवधारणा स्थापित गरेपछि ओलीको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिले कमिज–पाइन्टमाथि ज्याकेट लगाउन थाल्दछ, त्यसभित्र ओलीका सबै खालका स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवाद, मनपरितन्त्र, अराजकता, अप्रजातान्त्रिक र धार्मिक मनोवृत्ति सजिलैसित छोपिन पुग्दछन् । दुःखको कुरा देशको वामपन्थी जनमतको सर्वाधिक सङ्ख्या ओगटेको दाबी गर्ने पार्टीमा यस खालको विजातीय चरित्र देखा परेको छ । फेरि पनि ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यतानुसार वस्तुगत परिस्थितिका कारण ढिलो वा चाँडो एमाले पङ्क्तिको आँखा खुल्ने आशा गरौँ । सायद त्यतिबेला ओलीले गत कालको गल्ती स्वीकार्दै आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने छन् ।
सार रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेको अध्यादेशलाई कसरी बुझ्ने ? त्यो यो विषयमाथि निर्भर रहन्छ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बारम्बारको प्रतिनिधि सभा विघटनसहितको परिघटनालाई प्रतिगमन मान्ने कि नमान्ने ? माधव नेपाल पक्षले त्यसलाई प्रतिगमन मान्यो, त्यसकारण नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । त्यसका विपरीत ओली पक्षले त्यसलाई प्रतिगमन मानेन, त्यसकारण उनीहरू वर्तमान प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनको सरकारलाई असफल पारेर देशलाई पुनः चुनावतर्फ लैजान चाहान्छन् । त्यो यसका लागि कि जसले गर्दा ओली सरकारले बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नु सही निर्णय थियो, त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली जनता कोरोना महामारीको परीक्षण र खोपको अभावमा जतिसुकै सङ्ख्यामा मृत्युवरण किन नगरुन् ? यो परिस्थितिलाई ओली र उनी नेतृत्वको एमालेले त्यति महत्वपूर्ण विषय मानिरहेको देखिन्न ।
(प्रकाश थापा मगर साहित्य, पत्रकारिता एवम राजनीतिका क्षेत्रमा सक्रिय हुुनुहन्छ । उहाँ समसामयिक राजनीति एवम् समाजिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ ।)